हरेक-बिहान भिजेको चना खानुका फाईदै फाईदा ! तुरुन्तै हेर्नुहोस् – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / हरेक-बिहान भिजेको चना खानुका फाईदै फाईदा ! तुरुन्तै हेर्नुहोस्
admin November 8, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 136 Views
काठमाडौं : पोषणको मामिलामा चना निकै सस्तो, सुलभ तथा उपयुक्त विकल्प हो । चनामा प्रोटिन, फाइबर, लवण तथा भिटामिनहरु प्र”शस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरलाई स्व”स्थ राख्न म”द्धत गर्नुका साथै विभिन्न रोगहरुबाट पनि बचाउँदछ ।
हरेक बिहान भिजेको चना चपाउनुका फाइदा यी हुन् : भिजाएको चना उर्जाको ठूलो श्रोत हो, जसको नियमित सेवनले कमजोरीबाट मुक्ति पाइन्छ । · भिजाएको चनामा धेरै फाइबर पाइन्छ । यसले पाचन क्रि’यालाई सन्तुलित पार्दछ र क:ब्जियत पनि हटाउँदछ ।
हरेक दिन बिहान कम्तिमा १ मुठी भिजेको चना खाने गर्नुस् । यसले प्रजनन क्षमता तथा शु-क्रकिटको गुणस्तर तथा संख्या बढाउँदछ ।भिजेको चनालाई महमा मिलाएर खानाले प्रजनन श:क्ति तथा यौ:न क्षमता पनि बढाउँदछ ।
पटक-पटक पिसाब गइरहनुपर्ने तथा पाइल्सको समस्या छ रु यदि त्यसो हो भने नियमित रुपमा रहेक बिहान भिजेको चना खाने गर्नुस् ।
छालालाई स्वस्थ राख्नका लागि तथा चिलाउने, दाद, धब्बा जस्ता समस्या कम गर्नका लागि पनि नियमित रुपमा भिजेको चना खाने गर्नाले फाइदा पुग्दछ ।
शरीरको वजन वृद्धि गर्न, मां’शपेशी बढाउन तथा ससक्त बनाउन पनि चनाको नियमित सेवन गर्नुपर्दछ । · भिजेको चनाको नियमित सेवनले सरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै रुघाखोकीको समस्या पनि कम गर्दछ ।
रगतमा कोले”स्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गरी मु-टुलाई स्वस्थ राख्न तथा मु-टु र र’गत सम्बन्धी समस्याबाट जोगाउन पनि चनाले सहयोग गर्दछ । · चना आ’इरनको राम्रो श्रोत हो । भिजाएको चना नियमित रुपमा खानाले र:क्तअल्पताको सम”स्याबाट बच्न सकिन्छ ।
Previous छोरी घर बाहिर जथाभावी हिंड्न थालेपछि लगाईदिन्छिन् छोरीलाई ‘तीनमहिने सुई’ !
Next स्वस्थ भएर लामो आयु बाँच्न बिहान के गर्न हुदैन र के गर्नु पर्छ ?